Muuqaalka guud - Geofumadas
Khadadka dusha sare ee Google Earth - 3 tallaabo
Maqaalkani wuxuu sharxayaa sida loogu abuuro khadadka qaabdhismeedka qaabka dijitaalka Google Earth. Tan waxaan u isticmaali doonaa qalab loogu talagalay AutoCAD. Tallaabada 1. Muuji aagga aan dooneyno inaan ka helno tusaalaha dijitaalka Google Earth. Tallaabada 2. Soo dejiso nooca dijitaalka ah. Adoo adeegsanaya AutoCAD, markaad rakibtay Plex.Earth Add-ins. Marka hore,…
HEERBRUGG, SWITZERLAND, APRIL 10, 2019 - Leica Geosystems, oo qayb ka ah Hexagon, ayaa maanta ku dhawaaqday soo saarista qalab cusub oo loogu talagalay qabashada, qaabaynta iyo qaabeynta naqshadeynta; Leica iCON iCT30 si ay ugu keento wax-ku-ool badan warshadaha dhismaha. Qalabka iCON iCT30, oo lagu daro Leica iCON softiweerka dhismaha, waa…
Kulliyadda Rasmiga ah ee Sawirka ee Joomatics iyo Topographic Engineering waxay ku dhawaaqeysaa XI International Congress of Geomatics iyo Earth Sciences, oo lagu qaban doono Palacio del Congreso de Toledo (El Greco), laga bilaabo Oktoobar 26 ilaa 30, 2016. Dhacdadan muhiimka ah waxay leedahay ujeedadu tahay in la faafiyo horumarka sayniska iyo farsamada ...
Inaad noqoto sahamiyuhu waa waayo-aragnimo nololeed.
Jacaylka Ken Allred ee muuqaalka muuqaalka ma garanayo soohdin, iyo xiisaha uu u qabo daraasad u muuqata kuwa cusub sida xisaabinta xisaabta waa la is qaadsiinayaa. Hawlgab St. Albert MLA kama fikiro laba jeer inuu tilmaamo awooda sahamiyayaashu markay yeeshaan hal qodob oo ay ugu danbaynayaan ...